nidaamyada design software – GOF – Taylor Lopes ツ Blog
kombiyuutarada & Technology Information
nidaamyada design software – GOF
dirka 23 nidaamyada design (hannaankii design) software, labaad “GoF” (Gang of Afar).
Fikradda halkan waa in ay muujiyaan waxa iyo sida loo kala saaro nidaamyada design, sida keliya mar hore waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido badan si ay u xalliyaan badan oo ka mid ah arrimaha dadweynaha curdan, arkaan oo kaliya:
By beddelo gobolka ee fasalka, sameeysa doonayo mid ama ka badan noocyada gui ah in ay u baddashaan. si kastaba ha ahaatee, sameeysa ma heli xiiso leh si ay u abuuraan xigay xoog leh oo u dhexeeya fasaladaas. Waa maxay hannaankii of design habdhaqanka wanaagsan ee ku haboon in wax laga qabto xaaladda this?
( ) darka
( ) adabtarada
( ) Factory aan la taaban karin
Waxaa laga yaabaa in su'aasha u muuqataa in ay u baahan yihiin khibrad dheeraad ah, laakiin ogow in haddii aad ogtihiin soocidda, Aniga ayaa saas ku dhuftay karaa xukunka oo dhan. si faahfaahsan waa in qaybta ka weydiiyo “design hannaankii dabeecadda”, oo halkaas waa ka duwan mid ka mid kaliya ee ku habboon, hannaankii Observer ee. arrinta la xalin, si fudud!
on aragtida ah
laxanka waa this:
Ogsoonow in default adabtarada Waxay waxaa laga codsadaa oo keliya in labada fasalada sida walxaha for, taas oo ah sababta ay muujinayso miiska 24 ratings (oo aan 23).
Qurxinta laga yaabaa in aanay sida ugu wanaagsan ee ay u bartaan, laakiin si ka badan si ay u bartaan, tip this waxaad badbaadin kartaa waqti “H”. hab sahlan in ay qurxiyaan heerarka karana waa adoo mnemonics. No Blog Rogerio Araújo Waxay leedahay hab aad hal abuur leh, aad ku qurxin kaliya labo weedho iyo mar horeba ka dhigi kara rating wanaagsan, sidaas darteed:
heerarka abuurka (5)
a warshad aan la taaban karin dhistaa a noocooda oo keliya!
turjumaad: warshad (Habka Factory) aan la taaban karin (Factory aan la taaban karin) dhistaa (dhise) noocooda ah (noocooda) oo keliya (Singleton).
heerarka DHISMAYAASHA (7)
A Ponte habeeyey waa compote of qurxinta na tolnimo miisaanka duuli waa "Aproxymar"!
turjumaad: buundada (Bridge) habeeyey (adabtarada) kooban (darka) qurxinta (Decorator) on Aamino (tolnimo) inay flyweight ah (flyweight) waa "aproxymar" (badalka).
hannaanka dabeecadaha (11)
Barashada kuwaas oo heerarka abuuridda iyo dhismaha, inta kale waa heerarka dabeecadda.
(socda meelo ka baxsan)
(dhismaha) Beddelaan interface ee fasalka galay interface kale, filayaa by macaamiisha, fasalada jidaynayey la interfaces leheyn u wada shaqeeyaan, waxa, haddii kale, waxa ay ahaan laheyd wax aan macquul aheyn.
(dhismaha) Bixi hal interface a heerka sare ee set oo ah interfaces in jimaynta a. in si kale loo dhigo, Waxay bixisaa interface ah in muuqaalada kala duwan ee API ah (fasalada ururinta) fudud iyo hab fudud in ay isticmaalaan.
(dhismaha) U ogolow daaweynta walxaha shaqsi iyo darey oo alaab ah, kuwaas oo isku.
(dhismaha) uncouple (gaar ah) sidaynu ka hirgelintiisa si labada madax banaan kala duwanaan karaan.
(abuuridda) Hubi in fasalka uu tusaale ahaan ka mid ah oo keliya iyo bixiyaan helitaanka a dhibic caalamiga ah in ay.
(dabeecadda) Calan tiirsanaanta a on xiriirka fool-ka-badan oo u dhexeeya walxaha in markii mid ka mid ah shayga gobolka badala, ku tiirsan waxaa la ogeysiiyaa oo si toos ah updated.
(dabeecadda) Qeex shay in, islamarkaana sida set oo ah waxyaabaha la falgala.
(dhismaha) Bixi bedelka ama dhibic iyada oo shay koontarooli karaan helitaanka kale. Sidoo kale waxaa loo yaqaan gaadh.
Chain of Mas'uuliyadda
(dabeecadda) Koobanahay walxaha fatahmaan, dhex, wakiisho codsi ilaa shay si ay ugu adeegaan. Tani waxay ka hortagtaa xigay dhexeeya diraha ee codsi iyo addressee, siinaya fursad in ka badan hal shay xamili codsiga.
(dhismaha) Isticmaal wadaago si ay u taageeraan si fiican u wareejiso xaddi badan oo walxaha qalafsan (ganaax-grained).
(abuuridda) Kala dhismaha shay adag oo ka wakiil si hannaanka isku dhismaha abuuri karaan Wakiilada kala duwan.
(abuuridda) Qeex interface ah abuurista shay laakiin ha Banii- go'aan fasalka si instantiate. Waxa ay u ogolaataa instantiation eegtid Banii-.
Factory aan la taaban karin
(abuuridda) Bixi interface abuurayo qoysaska of shay la xidhiidha ama ku tiirsan oo aan la tilmaamayo fasaladooda la taaban karo.
(abuuridda) Sheeg noocyada in la abuuro tusaale isticmaalaya noocooda ah iyo in la abuuro waxyaabaha cusub by dayanayaan noocooda this.
(dabeecadda) Ku kaydi gobolka gudaha shay si ay u karin ayaa ay xaaladda ka dib dib loo soo celiyo (tirtireyso).
(dabeecadda) Qeex lafaha geynta ah in qalliin, ka tago qaar ka mid ah tallaabooyinka laga buuxin by Banii-. U suurto gashay Banii- ay xadaynta talaabooyinka qaar ka mid ah isku geynta ah oo aan waxba beddelin dhismeedkooda.
(dabeecadda) U ogolow shay in isbedel lagu dhaqanka iyo isbedelka gobolka gudaha.
(dabeecadda) Qeex qoyska ka mid ah algorithms, encapsulate kasta oo waxaan ka dhigi laysku beddelid karo.
(dabeecadda) Cajiib codsi shay, macaamiisha parametrizarem codsiyada kala duwan.
(dabeecadda) Marka la eego luqadda, qeexo matalaad ah ay naxwaha iyada oo turjumaan.
(dhismaha) Ku lifaaq mas'uuliyadaha dheeraad ah si shay dynamically.
(dabeecadda) Bixi hab si ay u helaan xubno ka ah sequentially wax wadar ahaan aan ku tiriska ay matalaad gudaha.
(dabeecadda) U taaga qalliin in lagu sameeyo waxyaalaha aasaaska ah ee qaab-dhismeedka shay. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad si ay u qeexaan howlgal cusub oo aan badalayn fasalada ee canaasiirta ee shirkaddu ka shaqayso.
Rogerio Araújo – nolosha, IT iyo Hirdanka
Total Furidda: 4783
26 October 2012 Taylor Lopes	rating gof, hannaankii design, burcad afar, gof, nidaamyada design software
cinwaanka email Your aan laga soo saari doonaa. Beeraha loo baahan yahay waxaa lagu calaamadeeyay la *
su'aalo uga hadashay
Haggaaji GPS Tracker si ay u helaan maps Internetka Sidaas daraaddeed aad u baahan tahay si ay ula socdaan aad baabuur Internetka, ka dib markii wadada, xawaaraha-waqtiga dhabta ah iyo meesha? Ama waxaa laga yaabaa hesho nabad dheeraad ah ee maskaxda garanaynin meeshuu qof qoyskaaga? this Fiiri! Introdução Hoje e...
Ctrl + C e Ctrl + V galaysa Windows e VM Linux ma Virtual Box Sida Copy / dhaji dhexeeya Windows Desktop iyo Debian virtualized? Xalka ugu cad noqon lahaa si loo soo dajiyo ah "daro Guest" samayn Oracle VM VirtualBox, laakiin waxa ku saabsan marka ay abuuraa qaladka "Ku guuldareysatay inay u qotomiyey vboxadd adeegga"? Introdução Antes de ma...
Device USB Aan la aqoonsan yahay – printer [xalin] Waxaa xusid mudan diiwaanka! Taas waxaan u leeyahay maxaa yeelay, madbacadaha maanta laba multifunction HP ayaa dhibaato la mid ah: "Device USB Aan la aqoonsan yahay". cad, xalka aad halkan ka heli! Problema Cena do crime: Laba daabacaadda ...
Ku shaqeynta Kaspersky furaha wadan kale (gobolka) Kani waa xalka ugu macquulsan ee looga shaqeyn karo dhibaatada hareeraha "Nambar-ka-shaqeyntu waa mid aan ansax ahayn gobolkaan", maadaama ay jiraan xayiraad ah in furayaasha qaar kaliya looga isticmaali karo gobolada qaarkood (wadamada). Problema Quem fe...
Ku rakib mPDF adiga oo aan lahayn Composer-ka serverka – wararka PDF la PHP mPDF The abuuraa PDF ka CSS / HTML la qalooca waxbarasho hooseeyo. Fikradda halkan waa in laga dhigo mPDF shaqo iyada oo aan loo baahnayn in lagu rakibo muusikada serverka. Composer ayaa loo isticmaali doonaa gudaha waxaana loo diri doonaa goor dambe serverka. KA DIGTOONOW: Hadaad ...
Kibir hayo by WordPress | theme: sorbet by WordPress.com.
Copyright © 2021 taylorlopes.com tan Oct 2012, 2.901.478 helitaanka
"Si aad iigu ducayso oo aan dhulka u ballaadhiyo, Waa i kan gacantaada oo i ilaaliyaa xun - waxaan CR 4:9"